Reer Sacuudi oo is Afgambiyey iyo Saadaasha Fog ee Sacuudiga – Radio Daljir
Juunyo 27, 2017 8:13 g 0
Muranka reer Sacuud waayahaan u dhexeeyey ma ahayn mid sahlan, markii uu bannaanka u soo shaacbaxayna waaba kaas oo gilgilay Bariga Dhexe.
Muranka reerku markii hore wuxuu ahaa “war yaa qabta Maxamed bin Salmaan!”
Maxamed bin Salmaan, loo yaqaan MbS, waa wiilka 31 jirka ee Boqorka Sacuudiga, Boqor Salmaan bin Cabdulcasiis Al Sacuud. Boqorku waa da’ ah xasuus xumana dakhtarkiisu waa uu ku sheegay, laakiin wiilkiisa uu wiilasha ugu jecelyahay ee MbS baa waligiis garabka midig ka fadhiyey, kursiga agtiisana ku soo barbaaray.
MbS bannaanka dalka uga bixin, waxna kuma uu soo baran jaamacado ajnabi, ee waxaa lagu soo tababaray dalka Sacuudiga, waxbarashana wuxuu ku dhameeyey magaalada Riyaad, Jaamacadda Boqor Sacuud (King Saud University).
Dhanka dhaxalka, safka hore ee boqortooyada waxaa waligiis taagnaa Amiir Maxamed bin Nayef, ahaana madaxa arrimaha gudaha, khibrad dheeri ahna u leh ladagaalanka argagixisada, guulo waaweyna ka soo hoyiyey dagaalkii xagjirka al Qaacida ee kal hore gilgilay Sacuudiga.
29 Abriil 2015, Boqor Salmaan wuxuu Maxamed bin Nayef ka dhigay Amiir ama Boqorsuge, noqonayana kan ugu horreeya oo helaya dhaxalka boqorka.
Laakiin saas ma ay noqon oo hadana boqorku waa isbadalay, oo 21 Juun 2017 ee asbuuc kahor dhammaan jagooyinkii uu hayey Maxamed bin Nayef waa uu ka xayuubiyey, wuxuuna Amiir ka dhigay wiilkiisa 31 jirka ah, Maxamed bin Salmaan (MbS), oo la wareegay dhammaan wixii jagooyin uu horay u hayey Maxamed bin Nayef iyo kuwo horleh.
Maxamed bin Salmaan waxay dhallinta Sacuudiga oo 70% ah tirada Sacuudiga ah u arkaan in uu yahay mid ayaga ka mid ah, jiilkoodiina uu hadda xukunka la wareegay.
Saas oo ay tahay, hadana xilwareejinta Sacuudiga ka dhacday waxaa dadka qaar u arkaan afgambi, kaas oo wiiqi kara awoodda isu dheelitiran ee Sacuudigu isku maamulo. Kaba sii daran e, waxaa baqdin laga qabaa hab-maamulka MbS oo ballanqaaday in Sacuudigu uu ka xoroobi doono ku xirnaanshaha dakhliga saliidda, una gudbi doono dhaqaale isku dheelitiran oo ka madaxbannaan saliid, kuna sallaysan “aragtidiisa fog ee 2030.”
Mid kale oo baqdin laga qabo ayaa ah waxa loogu yeeray “ismaqiiqa MbS” oo sidii uu u noqday Wasiirka Difaaca Sacuudiga bilaabay duullaanka Yemen. Dagaalka Yemen ayaa lagu macneeyey hadda in uu yahay khasaaraha ugu badan oo soo gaaray Sucuudiga iyo xulufadiisa, dhan dhaqaale iyo dhan magac-xumo.
Kaba sii daran e, khilaafka Sacuudiga iyo Qadar ayaa hadana loo arkay astaan kamid ah astaamaha MbS ee ismaqiiqa aan loo meel dayin. Sidoo kale 13 qodob oo Sacuudigu ka dalbaday in Qadar ay fuliso ayaa dhammaan dawladaha reer galbeedku ku macneeyeen mid xaqiiqada ka fog, una dhow gumaysi iyo bahdil Qadar.
Saas oo ay tahay, hadana Sacuudiga oo jiritaankiisu ay hadda saliidda ku xirayahay, ayaa sanadahaan qiimaha saliiddu waxay gaartay heerkii ugu hooseeyey, hadana halkii fuusto waxay suuqa caalamka ka maraysaa $45.
Taariikhda cusub ee Sacuudiga makii ugu horraysay waxaa la isweydiinayaa su’aasha “Sacuudigu ma sii jirin doonaa?”
Marka laga reebo wadamada Khaliijka oo hadda Sacuudiga la safan, laakiin aan la aqoon 6 bilood kabacdi meesha ay la safan doonaan, halka saaxiib ee Sacuudigu isku hallayn karo waa saaxiibka aan innaba hadda la isku halayn karin ee dawladda Maraykanka iyo madaxweyne Trump. Asbuuc gudihiis dawladda Maraykanka dhexdeeda waxaa ka soo baxay 3 war oo iskhilaafsan, mid Madaxweyne Trump uu Sacuudiga ku taageerayo, mid Wasaaradda Arrimaha Dibaddu ay Sacuudiga digniin ugu dirayso, iyo mid Difaaca Maraykanka ee Pentagon asna leeyahay “cid Qadar weerari kartaa ma jirto,” maadaama Maraykanku uu Qadar ku leeyahay saldhigga milateri kan ugu weyn Bariga Dhexe.
Jaahwareerku intaas kaliya kuma eka, ee Turkiga ayaan asna Qadar geeyey ciidamo dheeri ah, wuxuuna sii xoojiyey saldhiggiisa milateri ee uu ku leeyahay Qadar. Sidoo kale, Iran waxay sii xoojisay xiriirka ay Qadar la leedahay, waxayna diyaaradaha Qadar u furtay hawada Iran. Sidoo kale labada dal ee Turkey iyo Iran waxay Qadar ka kaafiyeen biyihii, qudaartii iyo cunadii awal ka imaan jirtay dalka Sacuudiga.
Haddii aad ku jaahwareertay siyaasadda dibadda ee Sacuudiga, dhanka Sacuudiga waxaa ka jira jaahwareer kaas ka sii daran. Sidii hore loogu heshiiyey, diinta iyo siyaasadda Sacuudigu waa kala madaxbannaan yihiin, laakiin ballanqaadka MbS ee ah in uu Sacuudiga badalayo, kana madaxbannaynayo ku xirnaanshaha saliidda (aragtida fog ee 2030), wuxuu ku daray in uu joojinayo cabburinta booliska diinta, dhallintana u ogolanayo in ay madadaashaan.
Dhallinta kaliya ma aha ee wuxuu MbS golihiisa wasiirada ka ansixiyey sharci fasaxaya in dadka oo dhan madadaalan karo, shineemo geli karaan, dhallintuna ay naftooda xor u yihiin.
Halkaas MbS kuma uu joojin e waxa uu ka dulbooday golaha la tashiga ee soojireenka ah ee dhanka shuruucda iyo diinta (siyaasadda iyo diinta), wuxuuna tashi la bilaabay dhallinta aqoonta leh ee “baraha bulshada” caanka ka ah.
Tashi la’aantaas ay golayaasha soojireenka ahi, siiba kuwa diinta, ay ku eedeeyeen MbS baa cabashooyinka gudaha Sacuudiga ugu weyn. Waxay ka cabanayaa in aan isbaddalka siyaasadeed tashi buuxa laga yeelan. Waxay ka cabanayaan in aan Maxamed bin Nayef si caddaalad ah loola dhaqmin. Waxay ka cabanayaan in MbS uusan lahayn khibrad maamul iyo mid dad wadasho. Waxa ay ka baqayaan in awooddii kooxda diinta maamusha la wiiqo.
Saas oo ay tahay, qorshaha MbS waa mid qarniyaal ku salaysan, waa mid Sacuudiga la damcsan isbaddal buuxa, waana mid uu shantii sano ee la soo dhaafay ku haminayey in uu ku hago Sacuudiga. Isbaddalka waxaa ugu weyn kan dhaqaalaha ee “aragtida fog 2030” kaas oo ay shirkadda McKinseys u dajisay dhaqaalaha Sacuudiga, MbS asna uu ugu yeeray kan Sacuudiga ka madaxbannaynaya ku xirnaashaha saliidda. Qorshahaas wuxuu sheegayaa in la iibiyo shirkadda Sacuudi ARAMCO ee saliidda, lagana dhigo mid gooni loo leeyahay, saamigeedana looga beecmushtaro suuqyada ganacsiga ee adduunka.
Isbaddelku sidiisaba ma aha mid si sahal ku yimaada, oo wuxuu u baahanyahay in koox kuraasta lagu tuuro, oo koox cusubi xukunka la wareegto. Isbaddalkaas baa siyaasiyiinta indheergaradka ahi ku macnaynayaan mid uu MbS boor kaga kicinayo meel kasta, gude iyo dibad, si indhaha mucaaradku u wareeraan, asna uu si sahlan xukunka kula wareego inta lagu mashquulsanyahay meelo kale. Weerarka afka ee Qadar sidoo kale waxaa lagu macnayn karaa qayb kamid ah boor-kicinta MbS.
Sidaas darteed, saadaasha Sacuudiga, tan MbS iyo tan saaxiibada Sacuudigu ma aha mid salhan 3 sano ee soo socota, haba ugu darnaato sannaadkaan 2017.
Siyaasadda & Dhaqaalaha 454 Wararka 17294